Ini Ndabvisa Iyo App Chitoro Kubva ku iPhone Yangu! (Kwete Iwe Hauna!) Kugadzirisa! - Iphone
zvekuita kana ipad yako isingabhadharise
yangu iphone 5s kamera haina kujeka
tambo yemuti wakaoma inorema zvakadii
Sei iphone yangu isiri backup kuicloud
Ine App Store, Safari, iTunes, kana App yeKamera ndashaikwa kubva ku iPhone yako, iPad, kana iPod? Nhau dzakanaka: Iwe hauna kudzima, nekuti haugone! Muchikamu chino, ndiri kuenda kukuudza maitiro tsvaga kuti App Store, Safari, iTunes, kana Kamera yakavanda kupi pane yako iPhone, iPad, kana iPod uye ndokuratidza chaizvo maitiro vadzorere!
Apple ndeyekuita kuti zvishandiso zvavo zvive zvemhuri zvine hushamwari uye vanovaka munzvimbo dzakasiyana-siyana dzekudzora kwevabereki kuitira kuti tigone kuchengetedza vana kuchengetedzeka. Nehurombo, kana zvasvika kune tekinoroji, zvinodzorwa nevabereki zvakavakirwa mumaPhones edu, iPads, uye maPods dzimwe nguva zvinoshanda zvakanyanya kune vakuru kupfuura vana. Kana isu kana mumwe munhu watinoziva netsaona akagonesa iyi ganhuriro, zvinoshungurudza. Kana tikakanganwa passcode yatinoisa, zvinotonyanya kuodza moyo. Uye ndiko kwandinopinda.
Kana usati wazvifunga izvo, ndokusaka App Store, Safari, iTunes, Camera, kana chero kumwe kushanda uko ndinofanira kuve pane yako iPhone yanyangarika:
Zvibvumirano (Apple's Parental Controls) zvakagoneswa pane yako iPhone, iPad, kana iPod, uye iwe (kana mumwe munhu waunoziva) waremadza maapplication aya kuti ashande pane chako kifaa.
Ngatidzokerei Mapurogiramu Ako Asipo
Heano maitiro ekugadzirisa: Enda ku Zvirongwa -> Screen Nguva -> Zvemukati & Zvekuvanzika Zvirambidzo . Tevere, tinya Mvumo Yakabvumirwa . Ita shuwa kuti switch dziri padyo neS Safari, iTunes Chitoro, uye Kamera yakavhurwa.
kurota uine nhumbu
Kana iwe uchitenda kuti wabvisa iyo App Store, dzokera ku Zvirongwa -> Screen Nguva -> Zvemukati & Zvekuvanzika Zvirambidzo . Wobva wadzvanya iTunes & App Store Kutenga . Ita shuwa kuti inodaro Rega inotevera Kuisa Mapurogiramu, Kubvisa Mapurogiramu, uye In-App Kutenga. Kana imwe yesarudzo idzi ikati Usatendere, tinya pairi, wobva wadzvanya Rega .
apple app chitoro chakakunda t kutakura
Unogona kudzima Screen Nguva zvachose kana iwe uchida kudzivirira kuti dambudziko iri rirege kuitika zvakare. Vhura Zvirongwa uye tapira Screen Screen -> Bvisa Screen Screen .
Kana yako iPhone iri kuita iOS 11 kana yapfuura, maitiro acho akatosiyana. Enda ku Zvirongwa -> General -> Zvibvumirano uye pinda iyo Zvirambidzo passcode iyo yakaiswa pane yako iPhone pawakatanga kugonesa Zvirambidzo. Izvi zvinogona kunge zvakasiyana nepasipoti kiyi iwe yaunowanzo shandisa kuvhura foni yako.
Nehurombo, kana iwe usingazive password iyi, iyo chete nzira yekudzima password uye kugonesa iyo App Store, Safari, iTunes, kana Kamera ndeye kudzoreredza yako iPhone kudzokera kune fekitori marongero uchishandisa iTunes. Enda pasi kuchikamu chinotevera kana uchifanira kudzorera yako iPhone, iPad, kana iPod.
Iye zvino zvatiri kutarisa iyo Zvirambidzo menyu, tinya Disable Zvibvumirano kumusoro kugadzirisa dambudziko kamwechete uye zvachose. Sezvo iwe paunotarisa kuburikidza nesarudzo, iwe ungangoona iwe netsaona uine kumwe kushanda kwakadzimwa.
Kana iwe uchifunga kuti wabvisa iyo App Store pane iyo iPhone inomhanya iOS 11 kana zvisati zvaitika, iwe ungangove wakangove 'Kuisa Zvirongwa' zvadzimwa. Iye zvino zvaunenge uri mukomana kana musikana muhombe, unogona kubata basa rekusarudza kuti ndeapi maapplication aunoda kurodha pasi kana zvaunoda kushandisa kamera kutora mifananidzo! Ndinofunga inguva yekusiya dendere.
Kana Iwe Uchifanira Kudzoreredza Yako iPhone, iPad, kana iPod
Kana iwe usingakwanise kurangarira yako Zvirambidzo pasipoti yehupenyu hwako, heano mamwe mazano ekuti dzoreredzo riende rakanaka uye rakatsetseka:
Dzorera yako iPhone, iPad, kana iPod ku iCloud , iTunes , kana Tsvaga usati wadzorera foni yako. Nenzira iyoyo, kungoitira kuti kana chimwe chinhu chikaenda wonky, iwe uri 100% wakachengeteka uye unonzwika.
Chinjana mafoto ako ese uye mavhidhiyo kune komputa yako uchishandisa USB charger tambo yakauya neako iPhone, iPad, kana iPod. Kuti udzidze zvakawanda nezve maitiro ekupinza ako mafoto uye mavhidhiyo kune komputa yako, tarisa chinyorwa chaApple chinonzi
Chinjana mapikicha nemavhidhiyo awakatumira kune yako komputa kudzokera kune yako iPhone, iPad, kana iPod uchishandisa iTunes kana Finder. Chekupedzisira, dzokororazve maapplication ako kubva kuApp Store. Rangarira kuti kana ukangotenga chimwe chinhu kubva kuApp Store, iTunes Store, kana iBooks, chakabatana nekusingaperi kuApple ID yako, saka haufanire kuzotengazve chero chinhu.
Zvako Zviripo Zvadzoka!
Ini ndakanyora iyi posvo mushure mekufemerwa neemail yandakatambira kubva kuna Mara K., uyo akatsvaga rubatsiro mushure mekunge murume wake anga ari parunhare neAt & T uye akashanyira Apple Store yavo yemuno. Moyo wangu unoenda kune avo vakapedza nguva yakawanda kuyedza kufunga kuti ungadai wakabvisa sei App Store, Safari, iTunes, Kamera, kana kuremadza chero chimwe chiitiko chakavakirwa-mukati chinouya neiyo iPhone , iPad, kana iPod.